Akụkọ - Nke isii nke China-Russia Expo, Harbin, China
Nke isii nke China-Russia Expo, Harbin, China
Harbin International Economic and Trade Fair (nke dị mkpirikpi dị ka HTF), tọrọ ntọala na 1990, enweela ihe ịga nke ọma maka afọ 29. Site na ebumnuche nke "Na-egosi Russia, Iche Northeast Asia, Radiating World, Ije Ozi na China niile," HTF bụ otu n'ime ihe ngosi kachasị ogologo emere na China, yana windo nke China iji zụlite ahịa mba dị iche iche na ihe dị mkpa ikpo okwu maka imekọ ihe ọnụ nke mpaghara ọwụwa anyanwụ Asia Na 2014, HTF ka emeziri nke ọma na China-Russia Expo, nke emere maka afọ ise gara aga.
Ihe 30Nke Harbin International Economic na Trade Fair ga-eme na Harbin International Conference Exhibition and Sports Center site na June 15 ruo 19, 2019. Site na mpaghara ngosi nke 86,000㎡, ọ na-edozi International na Hong Kong, Macao na Taiwan Pavilion, China-Russia Cooperation Pavilion, Machinery na Electric Products Pavilion, Large Machinery Ngosi Mpaghara na na. Ihe ngosi a na-ekpuchi nsonaazụ oru ngo nke ihe ndi sitere n'ala, oru ugbo nke oge a, imepụta akụrụngwa, aerospace, azụmahịa e-cross-border, ọrụ ọrụ na ihe ndị ọzọ. A usoro nke mgbanwe akụ na ụba na azụmaahịa, mkparịta ụka na ịmekọrịta egwuregwu, mgbasa ozi, dịka nzukọ, ọgbakọ ga-enwe ya.
The HTF ga-miri miri n'ime "-akwụnye na Road Initiative", iru-emeghe ekwenye ugwu, na-enye zuru play ka isi uru nke ebe mgbakọ na Northeast Asia, n'ọtụtụ ebe na-agba ọchịchị na ụlọ ọrụ si n'akụkụ ụwa nile isonye na ngosi na kwalite mmekọrịta mmekọrịta nke ahịa mba ụwa, isi obodo na teknụzụ.
A na-agba gị ume ka ị sonye na 30Nke Harbin Trade Fair iji kesaa ohere azụmaahịa ma chọọ mmepe nkịtị. Anyị ga-enye ọrụ niile maka ndị ngosi si ụlọ na mba ọzọ.
Oge Ngosi: 8: 30-17: 00 June 15 ruo 18, 2019
8: 30-14: 00 June 19, 2019
Oge Mberede Ngosi: 7:30 June 15, 2019
8: 00 June 16 na 19, 2019
Bọchị mkparịta ụka maka ndị nleta ọkachamara: June 15, 2019
Opbọchị Mmepe nke Ọha: June 16 rue 19, 2019
Harbin International Conference Exhibition na Egwuregwu Center
(Nke 301 Hongqi Str., Nangang Distr., Harbin, China)
AKWOVKWỌ NCHỌP .TA
86,000 ㎡ (internationallọ ndò mba ụwa 3000)
Okwu mmeghe nke ngosipụta na mpaghara
International, Hong Kong, Macao na Taiwan Pavilion
High na nkà na ụzụ ọhụrụ, mpaghara pụrụ iche ngwaahịa, ulo oru mbo na oru ngo imekọ ihe ọnụ, omenala mgbanwe na na site ná mba ọzọ na Hong Kong, Macao, Taiwan.
Villọ Nzukọ Mmekọrịta China-Russia
A. Mpaghara Ihe Oyiyi Obodo Russia. Gosiputa onodu ala Russia yana imekọ ihe n’etiti ulo oru ndi isi, Oblasts na Regions dị mkpa na China.
B. Mpaghara Imekọrịta mpaghara mpaghara China-Russia. Gosiputa ọnọdụ niile nke ụlọ ọrụ bara uru na mmepe mpaghara nke mpaghara China (obodo) na oblasts Russia (mpaghara)
C. Okwu Ngosiputa Okwu. Ndi oru China na Russia gosiputara ihe nile nke oru nkwado n'etiti obodo abuo na mpaghara di iche iche dika mmekorita nke oru, oru ugbo nke oge a, imeputa akuko, ugbo elu, ahia e-cross-border, ulo oru omenala na akụrụngwa.
D. Mpaghara Mgbasa Ozi Zuru Ezu. Ngosipụta sayensị na teknụzụ, ọrụ ego, njem na snow na akụrụngwa akụrụngwa, nlekọta ahụike obibi, ụlọ ahịa ọhụrụ na oriri ọhụrụ, ihe eji ewu ụlọ ọhụrụ nke mpaghara Heilongjiang.
Machinery na Electric Products Pavilion (Ngosi Tlọikwuu)
Mbukota na-ebi akwụkwọ igwe, plastic ígwè, woodwork ígwè, mmiri nhazi akụrụngwa, okporo ụzọ, akwa, ewu na m igwe na akụkụ, nri nhazi na mbukota ígwè, ngwaike ngwaọrụ, akpaaka akụkụ, lọjistik na ọkọnọ yinye ngwá na teknụzụ na ndị ọzọ na ígwè ọrụ ngwaahịa.
Large Machinery Ngosi Mpaghara (N'èzí Ngosi Mpaghara)
Igwe ihe owuwu, akuku ugbo na oke ohia, biomass ike teknụzụ na akụrụngwa, nnukwu ndị njem na ndị na-ebu ibu, ụgbọ ala ndị njem, akụrụngwa nchebe gburugburu obodo, akụrụngwa mberede, ebe ezumike n'èzí wdg.
AKW BKWỌ Azụmahịa
Jikọtara ọnụ nwee nzukọ, nzukọ ọmụmụ na ihe omume azụmahịa ndị ọzọ gbasara ọrụ ugbo, oke ohia, igwe, e-commerce, mkpochapụ kọstọm, lọjistik njem, njem ọdịnala ọdịnala, mgbanwe ndị ntorobịa, mmepe akụrụngwa, ngwaahịa ngwaahịa; N'otu oge ahụ, "Ndị 30NkeEmume ncheta nke HTF ”na usoro ihe omuma ahia mba ndi ozo puru iche na sayensi na sayensi ga-eme.
Ndị ngosi nwere ike ịdebanye aha na ntanetị site na weebụsaịtị (www.chtf.org.cn), oge ngwụcha maka ndebanye aha bụ Eprel 30, 2019.
A. Halllọ Nzukọ A, B na C
1. standardlọ ndò mba ụwa 9㎡ （3m × 3m） dị na US $ 1,500 ọ bụla n'oge ngosi ahụ. A na-eme ka ụlọ ntu ọ bụla n'ime ime ụlọ nwee akụkụ atọ nke bọọdụ ngosi, tebụl, oche 3, ihe ngosi 2, oghere ike nke 220V / 3A (n'ime 500W), bọọdụ lintel nwere aha ndị China na Bekee nke onye ngosi ahụ.
2. standardlọ ndozi achọpụtara nke 9㎡ （3m × 3m） nke nwere opekata mpe nke 36㎡n’oge ngosi ihe ma bawanye site na 9㎡ dị na US $ 1,900 n’otu n’otu oge ngosi ahụ. A na-edozi ụlọ ntu a na-edozi n'ime ime ụlọ na akụkụ atọ nke bọọdụ ngosi, tebụl, oche 3, mpempe akwụkwọ, ihe ngosi 2, oghere ike nke 220V / 3A (n'ime 500W), bọọdụ lintel nke nwere aha ndị China na Bekee nke onye ngosi.
3. Ime ụlọ ngosi ala dị na US $ 155 / ㎡ na opekempe chọrọ nke 36㎡nme ngosi ahụ ma bawanye site na 18㎡, na-enweghị ngwaọrụ ngosi.
B. Machinery na Electric Products Pavilion hib Ngosi Tlọikwuu）
9㎡booth ọ bụla na-efu US $ 900 n'oge ngosi ahụ. A na-arụzi ụlọ ntu ọ bụla na mpempe akwụkwọ 3 nke mbadamba, tebụl, oche 3, ihe ngosi 2, oghere ike nke 220V / 3A (n'ime 500W), bọọdụ lintel nwere aha ndị China na Bekee nke onye ngosi ahụ.
C. Mpaghara ngosi ngosi n'èzí dị na US $ 30 / ㎡ n'oge ngosi ahụ, ebe kacha nta iji gbazite bụ 50㎡, enweghị ụlọ ọrụ ngosi na inye ike.
1. A na-arịọ gị ka ị weghachite ego ụlọ maka ụlọ ntu tupu Mee 15, 2019. Oge ọ bụla ị ga-ewepụ ego mgbazinye dị n'elu ga-ahụta dị ka mwepụ nke afọ ofufo site na ihe ngosi ahụ, wee banye ụlọ ntu maka gị.
2. Payee: Nchịkwa Office nke China Harbin Economic na Trade Fair
3. oflọ Akaụntụ Maka dollar US: Bank of China, Alaka Heilongjiang
4. Tinye: Nke 19 Hongjun St., Nangang Dist., Harbin China
5. Nọmba Akaụntụ: 166451764815
EGO KWES .RAR
1. Exhibitor Card: a na-eme ka ụlọ ntu ọ bụla (9㎡) rụọ ọrụ na kaadị 3, a na-akwado mpaghara ngosi ngosi ọ bụla 50㎡ na kaadị 6.
2. Mbido Booth na Dismantling Card: a na-akwụ yuan 30 maka kaadị ọ bụla. (Mara: Ndị na - eme ihe ngosi nwere ike ịbata ma gbasasịa site na iwepụta kaadị ngosipụta ha)
3. Booth Mbido na dismantling Card maka Car: ụgbọ ala maka exhibitor Mbido na dismantling naanị 50 yuan na-ebubo maka onye ọ bụla kaadị
4. Maka inweta nkọwa ndị ọzọ biko rụtụrụ aka http://www.chtf.org.cn
AKWOOKWỌ AKW ANDKWỌ NA AHM
1. Booth Mbido na dismantling oge:
08: 00 June 8 ruo 12: 00 June 14: Ntọala ụlọ ndozi onwe
08: 00 June 12 ruo 12: 00 June 14: Ntọala ụlọ ntu
12: 00 June 14: halllọ ngosi ngosi ga-emechi maka nyocha nchebe
15: 00 June 19-18: 00 June 20: othlọ ndozi
2. -lọ ndozi ụlọ ịchọ mma nke onwe na-etinye usoro nnweta ihe owuwu ma na-agbasoro usoro “Nzube na Atụmatụ Nhazi nke China-Russia Expo”. Maka ozi ndị ọzọ biko rụtụ aka na http://www.chtf.org.cn
3. Maka ụlọ ndozi nke ịchọ mma onwe, ọrụ ntọala niile ga-arụ na mpụga ụlọ ngosi ihe ngosi ma nwee ike ịgbakọta na nnukwu ọnụ ụlọ ahụ. Ogologo ihe ngosi maka ụlọ ndina nwere ike ghara ịgafe mita 6.
4. Biko wetere anyị ntọala ala nke mbido ọkọlọtọ ma ọ bụ kwasasịa eserese nke mbido nnọkọ dị n'etiti ụlọ ntu na Nhazi Kọmitii nke Expo tupu May 31st. Ekwesịrị ime mgbanwe ọ bụla mgbe emechara ụlọ ntu ahụ, a gaghị arụ ọrụ ntọala rue mgbe akwadoro ngwa ahụ ma kwụọ ụgwọ ọzọ mgbe June 8th gasịrị.
5. N'ime nhazi nke ụlọ ntu, anaghị ekwe ka ọ nọrọ ebe ọha ma ọ bụ gbochie akụrụngwa mgbochi ọkụ. Ndị na-ekpughe ihe ngosi kwesịrị ikpochapụ ihe mkpofu na ngwa nkwakọ ngwaahịa n'otu ntabi anya.
6. Anabataghị ihe ngosi ngosi mgbe a na-eme ngosi.
1. Ngosipụta a ga - eweta ọrụ maka ndị ngosi na ndị nleta dịka ndụmọdụ, mkparịta ụka azụmaahịa, inye ma chọọ ịtọhapụ ozi n'ịntanetị, wdg.
2. Ngosiputa a gha enye ndi n’egosi ihe nlere dika ndi hoteeli, iwe ndi n’ego atughari, rentgbazite ugbo ala, ihe ndi ozo.
3. Centerlọ Ọrụ na pavilion na-enye ọrụ ndị a: mgbazinye nke ụlọ ọrụ ihe ngosi, post, tiketi, akụ, nkwukọrịta, netwọkụ, ebe azụmahịa, wdg.
4. departfọdụ ngalaba dịka Omenala, Nnyocha & Kwarantaini, Industrylọ Ọrụ & Azụmaahịa, Nlekọta Ogo, ikike ikike ọgụgụ isi, na Iwu ga-enye ọrụ saịtị, nke gụnyere ndụmọdụ gbasara iwu na iwu, dozie nsogbu na esemokwu n'oge Ngosipụta.
5. Ngosiputa a gha enye ndi n’egosi ihe nlere dika ihe omuma ihe nke ulo oru na nmezi, ihe omuma ndi ozo, wdg. Banyere ozi ndi ozo biko zoo aka na http://www.chtf.org.cn
Kọmitii Na-ahazi na-enye ọrụ ngosipụta maka ndị na-eme ihe ngosi.
Ndi ana-akpo: Oriaku Chen Liping
Faksị: + 86-451-82345874
Ngosiputa a gha enye ndi mmadu ihe ngosi, karia ndi nke na eme ihe ngosi, n’ime ulo ngosi a, isi obodo Harbin, akwukwo ndi mmadu nke Fair, tiketi ntinye na ebe nrụọrụ weebụ.
Ndi ana-akpo: Maazị Zhang Jianxun
Faksị: + 86-451-82273913
AKW PARTKWỌ AKW PARTKWỌ AKW SPKWỌ
Ndi ana-akpo: Maazi Wang Zhijun
Faksị: + 86-451-82340226
Na-ahụ maka mgbasa ozi na nkwalite nke ndị na-eme ihe ngosi, akụkọ na-agbanwe agbanwe maka akwụkwọ ngosi; Dezie mkparịta ụka pụrụ iche na ndị ọbịa dị mkpa na ndị isi azụmaahịa site na usoro mgbasa ozi na ụlọ na mba ofesi.
Ndi ana-akpo: Oriaku Zhang Yuhong
AKW EXKWỌ AKW EXKWỌ
Ndi ana-akpo: Oriaku Liu Yang
Ilọ Ọrụ Mgbakọ na Exlọ ngosi nke Heilongjiang
Tinye: No.35 Meishun St., Nangang Dist., Harbin China 150090
Faksị: + 86-451-82345874, 82340226